काखमा ल्यापटप राखेर चलाउँदा नपुंसकता हुने खतरा ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य काखमा ल्यापटप राखेर चलाउँदा नपुंसकता हुने खतरा !
काखमा ल्यापटप राखेर चलाउँदा नपुंसकता हुने खतरा !
२०७४, ९ माघ मंगलवार १८:५५
जुन पुरुष काखमा ल्यापटप राखेर चलाउछन उनीहरुको प्रजनन क्षमता घट्छ । यदी तपाई आफ्नो ल्यापटप काखमा राखेर चलाउने गर्नुहुन्छ भने सावधान हुनुस् ।
डाक्टरहरुका अनुसार यसो गर्दा पुरुषहरुको स्पर्ममा असर पर्छ र तपाई पिता वन्ने सुखवाट टाढा हुन सक्नुहुन्छ । व्रिटेनमा भएको एक घटनाले यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।
– मज्जाले घाम ताप्नुहोस् । घाम ताप्दा भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । यसले मानिसमा प्रजनन क्षमता बढाउँछ । भिटामिन डी ले महिलामा सेक्स हर्मोन प्रोजेस्टोन तथा एस्टोजेनको स्तर बढाउँछ जसबाट महिनावारी नियमित हुने तथा गर्भधारण सहज हुन्छ । पुरुषमा घामले शुक्राणुको संख्या बढाउन मद्धत गर्छ ।
दुग्धजन्य पदार्थले अण्डासयको कामलाई नियमित तथा सन्तुलित बनाउँछ । धूमपान त्याग्नुहोस् । धूमपान गर्ने पुरुषमा नपुंशक बन्ने खतरा ५० प्रतिशत बढि हुने तथा धूमपानका अम्मली पुरुषहरुमा शुक्राणुको संख्या कम हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
Previous articleडाक्टरले दिएका आँखाको दृष्टि जोगाउने ७ उपाय –
Next articleभुलेर पनि नगर्नुस् यी् काम, मिर्गौला खराब हुनसक्छ !